प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. भट्टराईले चिनियाँ दुतावासबाट रकम लिएको खुलासा – Gundruk Khabar
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. भट्टराईले चिनियाँ दुतावासबाट रकम लिएको खुलासा
in Backup, घटना, राजनीति, समाचार
काठमाडौं, ९ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघी चीनबाट रकम लिएको खुलासा भएको छ।
२०७४ असोज ३१ गते उनले चिनियाँ दुतावासबाट रकम लिइएको खुलासा भएको हो। मंसिरमा हुने चुनावको करिब ३५ दिन अघी उनले चिनियाँ दुतावासबाट नेपाल-भारत सम्बन्धको अनुसन्धानका लागि भन्दै रकम लिएको खुलासा भएको छ।
अनुसन्धानका लागि भन्दै चिनियाँ दुतावासले उनलाई चुनावी खर्चको रुपमा रकम दिएको पाइएको हो। रकम लिएको दस्तावेजमा भट्टराई आफैले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई पृष्ठको दस्तावेजमा भट्टराईले दुवै पेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने पारिवारिक रुपमा संचालिन उनको संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा उनकी श्रीमतीको नाम समेत उल्लेख छ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव लडेका भट्टराईले १५ लाख नेपाली रुपैयाँ (झण्डै १० हजार ५ सय युरो) काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबाट लिएको खुलासा भएको हो।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्धको अनुसन्धानका लागि भन्दै रकम लिइएको खुलासा भएको छ। भट्टराई उक्त समयमा नेपाल भारतबीचको वार्ताका लागि बनेको प्रवुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका थिए।
भट्टराईले चीनको सहयोगमा गरेको कामका लागि सन् २०१७ को अक्टोबर अर्थात २०७४ सालको संसदीय चुनावको एक महिना अघी मात्र लिएको पाइएको छ। चीनले उपलब्ध गराएको उक्त प्रोजेक्टकी प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भने राजन भट्टराईकै श्रीमती गीता गौतम रहेको पाईएको छ।
भट्टराईलाई चीनले नबिल बैंकको उनको खातामा रकम पठाएको पाइएको छ। यो सम्झौता चिनियाँले ‘विन विन’ को शैलीमा दिएको पनि बताइएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध अध्ययनका लागि चीनले रकम उपलव्ध गराएका बिषयमा हाम्राकुराले भट्टराई दम्पतीलाई पटकपटक बुझ्न फो सम्पर्क गरेपनि उनीहरु दुवैले फोन उठाएनन्।
भट्टराई सदस्य रहेको इपिजीको प्रतिवेदन अलपत्र
सूचना बेचेको आरोप लाग्दै आएका नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको नेपालतर्फका सदस्य समेत रहेका भट्टराईले नेपाल-भारत सम्वन्धका बारेमा अध्ययन गर्न भनेर रकम लिए लगत्तै प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन पनि विवादमा परेको छ।
आफ्नो संस्थालाई सहयोग गरेको बदलामा भट्टराईले ईपीजीको केहि आंशिक रिपोर्ट चीनियाँ पक्षलाई बुझाएको श्रोतको दावी छ। भट्टराईले चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि गठित दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित कार्यदल ईपीजीको अन्तिम रिपोर्टबाट लिइएको बताइएको छ।
ईपीजीको रिपोर्टको अंश चीनलाई चुहाएको आशंका पछि भारतले सो रिपोर्ट बुझ्न आनाकानी गरिरहेको इपीजी निकट स्रोतले जनाएको छ। ईपीजीपी, नेपाल–भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता र सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशका तर्फबाट बनेको प्रबुद्ध समूह हो।
भारत निकट मानिने भट्टराई पछिल्लो समयमा चिनियाँहरुसँग नजिक हुँदै गरेको बताईन्छ।